I-Interactive Infographic Trend | Martech Zone
Lwesibili, Disemba 10, 2013 NgoLwesibili, Januwari 21, 2014 USavannah Marie
Kuyo yonke le minyaka embalwa edlule, i-infographics bebekuyo yonke indawo futhi ngesizathu esihle. Izibalo zivame ukudingeka ukwengeza ukwethembeka, futhi ama-infographics enza kube lula ukudiliza imininingwane okungenzeka ukuthi ibinzima kakhulu kumfundi ojwayelekile. Ngokusebenzisa i-infographics, idatha iba yokufunda futhi kumnandi ukuyifunda.
Njengoba u-2013 usuzophela, ama-infographics ayaphinda futhi aguqula indlela abantu abalugaya ngayo ulwazi. Manje, ama-infographics awagcini nje anemibala egqamile, amafonti adonsa amehlo nemiklamo emihle. Ezinye, ezibizwa ngokufanele ngokuthi i-interactive infographics, zifaka ukugqwayiza, izixhumanisi nezinye izinto ezenza kube lula ukuthi abantu bathole imininingwane ye-infographic uqobo. Lawa ma-infographics athuthukile futhi akhomba abantu lapho bebheka khona ukuthi bangakutholaphi okuqukethwe okwengeziwe okuhambisana nakho. Qhubeka ufunda ukuze ufunde izizathu ezimbalwa zokubenza babe yingxenye yamasu akho wokuthengisa wokuqukethwe wesikhathi esizayo.
Ngoba ama-infographics asebenzisanayo akhanga kangako, abantu bangacabanga ukuthi izinto zokwakha ziyinkimbinkimbi kakhulu. Ngenhlanhla, ubuchwepheshe obunjengokwakhiwa okuphendulayo kusizile ukwenza ama-infographics asebenzisekayo alula ukudala, futhi ezinye izinhlelo zikwenza ukuthi kusebenze kakhudlwana noma ngabe uzama ukwakha eyodwa ngaphandle kwesizinda sokubhala ngamakhompyutha.
Bangasiza Umkhiqizo Wakho noma Umyalezo Uhambe Ngegciwane
Mhlawumbe ungacabanga ngezibonelo ezimbalwa zamavidiyo we-Youtube noma ama-meme ebengazwakali ngosuku olulodwa bese ngokuzumayo kukhulunywa ngabo bonke abantu kusukela kubaphathi bezingxoxo zasebusuku kakhulu kubo bonke abangane bakho ezinkundleni zokuxhumana. Imvamisa, umfutho wezenzeko ezinjalo uhlobene nokuthi okuqukethwe kulethwa kanjani.
Enye inzuzo ye-infographics esebenzisana ukuthi ikuvumela ukuthi usebenzise womabili amagama nezithombe ezihambayo ukushayela iphuzu ekhaya. Uma abantu abanele benaka, umyalezo wakho noma igama lingaba sezindebeni zawo wonke umuntu ngezinsuku nje. Kwesinye isikhathi, izishoshovu zaseSyria zisebenzise i-infographic ehlangene ukukhombisa izindawo nezinhlobo zokumelana okungenabudlova, ezinemibala emihle, ukwakheka okujabulisayo nezixhumanisi eziwusizo ezichaze imizamo yezimbangela ezithile ngokuningiliziwe.
Bayasiza Ekugcinweni Kwemininingwane
Ama-infographics amaningi asebenzisanayo aklanyelwe ukuthi abasebenzisi bezingxenye badlule kuwo, bafakwe izindawo ezandayo lapho zithintwa ngesikhombi segundane. Ngaphandle kokusiza ukunakwa, lezi zici zithuthukisa amathuba okuthi abantu bahlale isikhathi eside futhi bafunde, kunokuchofoza kwenye indawo. Ama-infographics asebenzisanayo avumela ukubuka ukuthi kulawule ulwazi lwabo nezinga abafunda ngalo. Izingxenye zeCJ Pony zakha i-infographic exhumanayo enikezelwe kumsunguli embonini yezimoto, uCarroll Shelby, nempumelelo yakhe yokuthweswa umqhele, iShelby Cobra. Le infographic ivumela umbukeli ukuthi "aqhube" uShelby Cobra emhlabeni jikelele.
Ukuxhumana nakho kungasiza uma uzama ukudlulisa umehluko phakathi kwamanani. Uma abasebenzisi bekwazi ukuhambisa igundane labo engxenyeni ethile yomdwebo futhi bayibuke inweba ukumela inombolo ethile, kungenza idatha ibe sethubeni lokunamathela kwimemori, kunokuba isheshe ikhohlwe.
Bangakusiza ukuthi Uthole Ukuhola
Wake wacabanga ukusebenzisa i-infographic ehlangene njengethuluzi lokuthengisa? Leyo kungaba yindlela yesikhathi esizayo, ikakhulukazi kubantu abathengisa izinto ezingalethwa kubathengi ngokushesha, njengama-e-book. Noma ngabe uzama ukwenza abantu babe nentshisekelo ekuqoqweni kwamathiphu asheshayo okuthola umsebenzi ophelele noma ufuna ukukhulisa inani labantu ababhalisela okuqukethwe kwebhulogi lakho, i-infographic esebenzisanayo ingazisa abantu ukuthi yini abangayilindela uma bethenga okuthile .
Vumela i-infographic ilingise ithoni nesitayela sokuqukethwe okutholakala ezintweni ozithengisayo, bese uqinisekisa ukufaka isixhumanisi esiyisa abantu ngqo ekhasini lapho bengathenga khona into.
Ungashintsha leli qhinga kancane ngokungeza into exhumanayo evumela umuntu ukuthi abhalisele i-newsletter yakho ngokuchofoza okukodwa nje. Zama lokhu lapho usanda kuveza i-infographic egcwele amaqiniso athakazelisayo, futhi ufuna ukuqiniseka ukuthi ababukeli bayakwazi ukuthola okuningi kokuqukethwe okufanayo.
Bangakwazi Ukushiya Imibono
Inkampani enikeza umshuwalense wezempilo kubantu basePhilippines nayo ithembele kwi-infographic exhumanayo ukuxwayisa ukuthi kungabiza malini ukugula njengomuntu ongakatholakali. Inhloso bekuwukunxusa abantu okungenzeka ukuthi banethemba lokuthi bazohlala bephilile futhi banquma ukuthi izindleko zokutholakala komshuwalense wezempilo zikhulu kakhulu ukuthi bangazithwala. Ngokuqhathanisa ngokucophelela izindleko ezihambisana nezifo ezinkulu uma kuqhathaniswa nokutholakala kwempilo, umdali wayenethemba ngokusobala lokushintsha umbono wokuthi umshuwalense wezempilo uyizindleko ezingadingekile.
Ungahlela ukwenza into efanayo ukufinyelela kumakhasimende ngokulandela ukungaqondi okuncane noma ukugqamisa izinzuzo ezithile zemikhiqizo yakho okungenzeka ukuthi ngaphambili zazingaziwa kubabukeli bakho abaningi.
Izibonelo ezingenhla ziyizizathu ezimbalwa zokuthi kungani kuhlakaniphile ukusebenzisa ihluzo ezisebenzisanayo kumasu akho wokumaketha azayo. Abanye abathengisi sebevele bazisebenzisele ukuthola imiphumela emihle, futhi ukuvelela kwabo kubonakala sengathi kuzoqhubeka nokukhuphuka ezinyangeni ezizayo.
Tags: I-infographics esebenzayomarketingI-Marketing Infographicsizitayela
I-AdTruth: Ukuqashelwa Kwezithameli Zomhlaba Wonke
Dec 11, 2013 ku-12: 08 AM
"Isithombe sibiza amagama ayinkulungwane!"
Dec 12, 2013 ngo-1: 43 PM
Siyabonga ngokwabelana ngendatshana! Imidwebo yolwazi iyindlela engcono kakhulu yokuguqula abafundi babe ama-scanner